Arduino Oplà IoT Kit yekuvandudza iyo Internet yezvinhu | Mahara emahara
Arduino Oplà IoT Kit: iyo nyowani yekuvandudza kit yeInternet yezvinhu
Arduino ine nhamba huru ye zvinowirirana zvikamu, Uye zvakare ekuvandudza makiti nezvose zvaunoda kuti utange kana kune akati wandei epamberi DIY mapurojekiti. Asi kubva zvino zvichienda mberi, vagadziri vane zvakare kititi chitsva chakanangana nekuvandudza zvirongwa zveIoT. Nenzira iyi iwe unenge uine zvese zvaunoda kuti utange munyika yeInternet yezvinhu.
Ane yakanaka repertoire yezvinhu izvo zvinokufadza, uye izvo zvinonyanya kushanda kune ese akabatanidzwa kunyorera uye smart imba ...
1 Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo Arduino Oplà kit
1.1 Kit zvikamu
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo Arduino Oplà kit
Iyi purojekiti nyowani yeInternet yezvinhu, kana IoT, ndicho chinhu chitsva cheArduino. Kit chepamutemo chakaburitswa pasi pezita Arduino Opla IoT Kit uye necheti yezvidimbu izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire anosvika gumi nemasere maficha mune ino ndima, ine dzidziso dzakadzama dzekuti utange kugadzira uye iwe zvaunogona kuwana kubva ku zviri pamutemo webhusaiti kubva Arduino.
Iwo mapurojekiti chii chaunogadzira Chete neiyi kit, ivo vanobva pane yakapusa kure kudzora mwenje yemumba, kune akangwara manejimendi yeiyo yese yekudiridza system yebindu, kuburikidza nevamwe sekugadzira zvinyorwa uye kudzora mamwe akangwara masisitimu, chengetedzo, nezvimwe.
El mutengo i $ 99 uye yatowanikwa kubva Arduino yepamutemo webhusaiti, panguva ino haigone kuwanikwa kumwe kunhu. Mukutsinhana neiyi kukosha, iwe unowana, mukuwedzera kune iyo kit yacho pachayo, zvakare kunyorera kwemwedzi gumi nemaviri kuArduino Gadzira Muumbi Chirongwa. Izvo zvinopa mukana kune iyo Arduino IoT Cloud, ichibvumira vashandisi kuchengeta sketches mugore, kuwedzera huwandu hwezvinhu, uye kuwana rutsigiro rwechitatu-bato mabhodhi uye zvishandiso zveLoRa, pamwe neyakaganhurirwa inovaka.
Mushure memwedzi gumi nembiri, vashandisi vachiri kufarira kuenderera nemasevhisi vanofanirwa kumutsiridza iyo kunyorera kwe $ 5.99 pamwedzi (Ukasazvimisa, vanokuchaja zvega).
Kana zvakadaro izvo zvikamu zveArduino Oplà IoT Kit, une zvinhu zvinotevera:
Main base ine color LCD skrini, dzakasiyana mhando dze sensors, capacitive controller, RGB maLED, uye zvimwe zvinhu uye zvinongedzo.
Iyo zvakare inosanganisira iyo WiFi bhodhi yekuwedzera isina waya kubatana kune ako mapurojekiti.
Mamwe maseru, epurasitiki dzimba, uye PnP (Plug & Play) tambo. Zvese kuitira kuti mapurojekiti agone kuunganidzwa pasina kusanganisa chero chinhu.
Para mamwe mashoko, unogona kuona iyi vhidhiyo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Arduino Oplà IoT Kit: iyo nyowani yekuvandudza kit yeInternet yezvinhu
PIR sensor: zvese zvaunoda kuti uzive